အထွေထွေ (ဆေးဌာန) ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
၂၇-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၂၀-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၀/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၀/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၇-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၈/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၈/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၂၃-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၇/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၇/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၁၇-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၉-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၅/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၅/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ
၂-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၄/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် (24)၊ အပြည့်အစုံ (24) ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၄/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ .အပြည့်အစုံ (33)
၂၆-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၃/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၃/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ .အပြည့်အစုံ
၁၉-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၂/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၁-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၅-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၈-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၁-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၄-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၇-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၉-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၃-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၉-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၉-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၂-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၉/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၉/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ် (56) ၊ အပြည့်အစုံ (52) ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ (74)
၂၆-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၃-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၅-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၅-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ….
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုခဲ့သည့် စာရင်းများ
၁၉-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၄/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၄/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၃/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၃/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၇-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၂/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချူပ် ၊ အပြည့်အစုံ
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၂/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၀-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၁/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ်…၊ အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၁/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ..
၁၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၀/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ်…၊ အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄၀/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ..
၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၉/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း စာရင်းချုပ်…၊ အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၉/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၂-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၈/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၈/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၆-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၇/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၇/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၉-၁၀-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၆/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၆/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၅-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၅/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၅/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၄/၂၀၁၈) မှ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံသည့် အမှုတွဲများစာရင်းနှင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များစာရင်း အပြည့်အစုံ…
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၄/၂၀၁၈) မှ ရောဂါအလိုက် ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ အပြည့်အစုံ…
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလအထိ)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဆေးဖိုးပြန်အမ်းမှု လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ
၁။ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ဆေးဖိုးပြန်အမ်းစာရင်း ၂၂,၂၅၈ ၂,၁၉၁.၈၃၇
၂။ ကဲဝဲလ်ဆေးခန်းများ၏ ဆေးကုသစရိတ် ၁၂၉,၃၄၂ ၉၅၂.၆၇၂
၃။ MMU ဖြင့် ဆေးကုသစရိတ် ၁၅၈,၄၆၄ ၁,၂၇၄.၆၃၆
စုစုပေါင်း ၃၁၀,၀၆၄ ၄,၄၁၉.၁၄၅
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းလျှောက်ထားမှုတွင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့သူများစာရင်း….. က်ပ္သံုးသိန္းႏွင့္အထက္ (254)
ဆေးဖိုးပြန်အမ်းလျှောက်ထားမှုတွင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့သူများစာရင်း….. က်ပ္သံုးသိန္းႏွင့္ေအာက္ (208)
အာမခံအလုပ်သမားများအား ကွင်းဆင်းဆေးကုသပေးမှုများ . . . . . အပြည့်အစုံ သိရှိရန်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူရေး အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပြုလုပ်ခြင်း
Published date : Jul 2, 2012
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အာမခံအလုပ်သမားများအား အခမဲ့ ဆေးဝါး ကုသမှု ပေးနိုင်ရန် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘဏ္ဍဍာရေးနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၈.၆.၂၀၁၂)ရက်နေ့နှင့် (၁၉.၆.၂၀၁၂) ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများ တွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့ရာ ဆေးကုမ္မဏီပေါင်း (၄၉)ခုမှ တင်ဒါများ တင်သွင်းခဲ့ကြသည် . . . . .
ပထမအႀကိမ္ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူေရး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အျပည့္အစုံ (582)